KULANKA LAGU QABTAY QARINTA 100% HUBO - Ciyaaraha go'an ee bilaashka ah, HT/FT Ciyaaraha go'an, Ku guuleysiga Ciyaaraha go'an, Talooyinka Kubadda Cagta ee Bilaashka ah 1x2 Saadaasha, Talooyin Maalinle ah 1x2 Kubadda Cagta, Kubadda Cagta 100% hubaal;
KULANKA XASAN OO SHARCIYEY 100% Hubaal
Ciyaaro go'an oo bilaash ah, HT/FT Ciyaaro go'an, Ku guulaysta ciyaaraha go'an, Talooyinka bilaashka ah ee Kubadda Cagta 1x2 Saadaasha, Talooyinka maalinlaha ah 1x2 Kubadda Kubadda Cagta, Kubadda Cagta 100% hubaal;
KULANKA XASAN 100% waa hubaal
Hel Tartamo go'an
Kulamada go'an 100% waa hubaal
Kharashka Wayn ee la heli karo 21.05.2022 Sabtida
Waxaan leenahay labo kulan go'an oo nus saac/buuxa ah oo leh khayaali ciyaartiiba ku dhawaad ​​25.00 iyo wadarta qiyamka labada kulan ee wada jira had iyo jeer waa ilaa 500.00; Haddii aad rabto waxaad ka iibsan kartaa hal kulan oo kaliya labadan kulan go'an ama haddii aad rabto waxaad u iibsan kartaa labada kulan ee Big Odds!
24/7 Taageerada WhatsApp
Doorashada ugu fiican ee lacag dirid haddii aad rabto in aad iibsato our kulan go'an waa Cryptocurrencies (waxaad isticmaali kartaa dhammaan Cryptocurrencies, sida Bitcoin, Ethereum, USDT Tether iyo dhammaan kuwa kale), Money Perfect, Skrill, Neteller, Ria Money, MoneyGram iyo Western Union. Hababka kale ee lacagta lagu diri karo lama heli karo.
Riix Halkan si aad u aragto dhamaan iibinta HT/FT Matches go'an
Halkan hoose waxaad ku arki kartaa HT/FT-tayada ugu dambeeya ee Ciyaaraha go'an
14.05.2022 - Sabti
Horyaalka: Qeybta BOLIVIA Xirfadle - Apertura
Ciyaarta: Oriente Petrolero – Santa Cruz
Talo: 1/2 (Wakhtiga Nuska/Waqtiga Buuxa)
Natiijooyinka: 34.00 1:0/1:2 Guuleystay
Horyaalka: TURKIGA 1. Lig
Kulanka: Altinordu – Balikesirspor
Talo: 2/1 (Wakhtiga Nuska/Waqtiga Buuxa)
Natiijooyinka: 23.00 0:1/2:1 Guuleystay
GUUL GUUL GUUL
Halkan hoose waxaa ah cadeymo kooban
Halkan waxa aad ku arki kartaa cadaymaha shaashadda, laakiin haddii aad rabto inaad aragto cadaymo muuqaal ah waa inaad furto kanaalkayaga YouTube. Halkan mareegahayaga sababo ammaan ma daabici karno caddeymahayaga muuqaalka ah.
Haddii aad rabto inaad nagu soo booqato YouTube Channel RIIX HALKAN
Riix Halkan si aad u aragto dhammaan cadeymaha HT/FT sharad go'an
La cusbooneysiiyay: Meey 15, 2022 - 1:10 galabnimo
SADAALINTA TALOOYINKA BILAASH AH
Hel Talooyin Saadaasha
Saadaasha Talooyin Bilaash ah
Boggeena GetFixedMatch.com maalin walba waan daabacnaa Ciyaaraha bilaashka ah ee sharadka Kubadda Cagta. Aad ayey muhiim u tahay inaad taas ogaato Ciyaaraha bilaashka ah waa Saadaasha tanina maaha Ciyaaraha go'an waa hubaal guul.
Ciyaaraha bilaashka ah waa u dhigma waxa laga saadaaliyay taliyayaasha kubbadda cagta, tani waa taraq la falanqeeyay. Kulamada go'an waa kulano meesha lagu heshiiyo oo faa'iidada la dammaanad qaado.
Waxaad u baahan tahay inaad go'aansato, haddii aad rabto Ciyaaraha bilaashka ah markaas faa'iidada lama dammaanad qaadi doono. Haddii aad rabto Kulamada go'an markaa waa in aad nala soo xidhiidho ama aad awoodid Riix Halkan si aan u aragno dalabkeena soo socda marka aan haysano Kulamada go'an waadna iibsan kartaa.
La cusbooneysiiyay: Abriil 30, 2022 - 6:30 pm
Kubbada Sugan ee Khamaarka Ciyaaraha go'an
16.05.2022 - Isniin
Horyaalka: NORWAY Eliteserien
Ciyaarta: Viking – Jerv
Talo: Ka badan 2.5 Gool
Nasiib darro: 1.50 Natiijo: ?:?
15.05.2022 - Axad
Horyaalka: Netherlands Eredivisie
Ciyaar: AZ Alkmaar – Waalwijk
Khasaarada: 1.50 Natiijooyinka: 1:3 Guuleystay
Horyaalka: NORWAY Qeybta 2 – Group 1
Ciyaarta: Lama Oga – Garoonka
Khasaarada: 1.50 Natiijooyinka: 2:0 Lumay
13.05.2022 - Jimce
Horyaalka: AUSTRIA 2. Liga
Ciyaarta: St. Polten – Wacker Innsbruck
Khasaarada: 1.50 Natiijooyinka: 3:1 Guuleystay
12.05.2022 - Khamiis
Horyaalka: ICELAND Besta-deild karla
Ciyaarta: Vikingur Reykjavik – Fram
Khasaarada: 1.50 Natiijooyinka: 4:1 Guuleystay
11.05.2022 - Arbacada
Ciyaarta: Valur – Akranes
Khasaarada: 1.50 Natiijooyinka: 4:0 Guuleystay
Ciyaaraha Go'an ee Kubadda Cagta, Ciyaaraha go'an ee bilaashka ah, Kulamada go'an ee ugu Fiican 1×2 Talooyin;
La cusbooneysiiyay: Meey 16, 2022 - 9:31 subaxnimo
Tags: Baro Tartamo go'an, Ciyaaraha Go'an ee Kubadda Cagta, Kubadda Cagta Ciyaaraha go'an, Tigidhka Ciyaaraha go'an, Kulamada Go'an ee Maalinlaha ah
TALO BILAASH AH 1X2
Talooyin bilaash ah 1×2 Kubadda Cagta
Talooyin Bilaash ah 1×2 Ciyaaraha sharadka
Dhammaan xiriirinta mareegaha kale ee mareegahayaga wax xidhiidh ah nalama laha. Waa xayaysiis uun. Haddii aad rabto in aad Iibso kulannada go'an 100% hubaal ka dibna mareegahayaga GetFixedMatch.com waa meel kugu haboon.
La cusbooneysiiyay: Meey 16, 2022 - 12:41 galabnimo
← Qoraaladii hore
Taageerada WhatsApp 24/7
Caddaynta Fiidiyowga YouTube
Dhammaan cadeymaha muuqaalka waxaad ka heli kartaa kanaalkayaga YouTube. Sababo ammaan dartood ma daabici karno caddaynta muuqaalkeena mareegahayaga. Waa inaad booqataa kanaalkayaga YouTube si aad u aragto dhammaan cadaymaha fiidyowga ah. Riix Halkan haddii aad rabto inaad booqato kanaalkayaga YouTube!
Hel Tartamo go'an (1)
Hel Talooyin Saadaasha (82)
HT/FT Archives khamaarka go'an
CADDAYNTA HT/FT SHAQADO go'an
Go'an Single Match Dhab ah
Dhibcaha Saxda ah ee Go'an
VIP Tigidh Go'an
Ciyaaraha go'an ee IQ
Xaqiiqooyinka H2H Maqal Go'an
Guulayso barbaro go'an
Kharashaadka go'an 1×2
Saadaasha Bet Top
Talooyin isku dheeli tiran oo go'an 1×2
Talooyin Bet24 go'an 1 × 2
Tilmaamaha Ciyaaraha Saadaasha ugu Fiican
Helena 1×2 Talooyin Isboorti
Talooyin Isboorti Go'an oo Kulul
Tilmaamaha Saadaasha Kubadda Cagta 1×2
Xulashada Pro 1×2
Bet 1×2 Talooyin Kubadda Cagta Maanta
Talo Ciyaar Go'an